एक वर्षमा चार करोडको ट्राउट
२०७७ पौष, २१
यस वर्ष ट्राउट माछाको व्यवसायमा वृद्धि भएको छ । अहिले विभिन्न जिल्लामा गरेर व्यावसायिक रूपमा ट्राउट माछाको वार्षिक कारोबार झन्डै चार करोडको हुने गरेको छ । यी फार्मबाट अहिले वार्षिक करिब ५५ मेट्रिक टन ट्राउट उत्पादन तथा विक्री हुने गरेको हिमालयन रेन्बो ट्राउट एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष महेन्द्र घोरसैनीले जानकारी दिए । गत वर्ष ट्राउटको प्रतिकेजी औसत मूल्य रू. ७०० रहेको थियो । यसअनुसार ५५ मेट्रिक टनको मूल्य रू. ३ करोड ८५ लाख आउँछ ।
मानसरोवर हिमालय रेन्बो फिस हाउसले मात्र अघिल्लो वर्ष झन्डै १२ हजार किलो ट्राउट विक्री गरेको थियो । मानसरोवर लगानी तथा ट्राउट उत्पादनका हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठूलो फार्म हो । २०६५ मा करिब ५० लाख रुपैयाँको माछा बिक्री गरेको यस फार्मले गत वर्ष ८० लाख टेबल साइजका (विक्रीयोग्य) ट्राउट विक्री गरेको हाउसका व्यवस्थापकसमेत रहेको घोरसैनीले भने । गत वर्ष २ लाख ट्राउटको भुरा उत्पादन गरी ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाएको उनले बताए भुराको मूल्य आकारअनुसार ५ देखि ८ रुपैयाँसम्म पर्ने बताइएको छ ।
अहिले यो माछा फार्मबाट प्रतिकेजी ७०० रुपैयाँमा विक्रीकेन्द्रबाट ८ सय ५० रुपैयाँमा विक्री हुने आएको छ । गत वर्र्षबाट फर्मबाट प्रतिकेजी ६ सय र विक्री केन्द्रबाट ७ सय ५० रुपैयाँमा विक्री भएको थियो । अन्य जातको तुलनामा ट्राउट ढिलो बढ्छ । त्यसैले यसको उत्पादन लागत धेरै पर्ने र माछा महँगो हुने किसानहरू बताउँछन् ।